Tallaabooyin Adjusted Azure PowerShell Step-By-Step (Ku rakib iyo Qalalan) - ITS tababarka
Qalab Qaadista Shirkadda Azure PowerShell Tallaabo-tallaabo (rakibo iyo Qalabaynta)
Sida loo sameeyo PowerShell Azure?
Guudmarka illaa Azure
Waa maxay PowerShellka Azure?
Soo bandhigida PowerShell Azure
Koorasyada la xiriira:
Microsoft Azure, oo loo yaqaan "Azure Azure" waa mareegta loo qaybiyo Microsoft iyo qaabka la filayo in ay bixiso miisaaniyad macaamiil ah oo macaamiisha loo qaybiyo ee nidaamka nidaamka, imtixaan, kaydka, iyo wixii la mid ah. Nidaam caalami ah oo beeraleyga Microsoft ah ayaa bixiya xafiisyo si ay u fuliyaan hawlgallada jira ee daruuriga guud ama haddii ay u baahan yihiin, cabiraan ama ay sameeyaan codsi kale. Maamulada buluuga ah ee Sky waxay ku jiraan noocyada kala duwan ee 11 ee Microsoft. Waxay yihiin: PC, shabakad iyo qaabab badan, imtixaan, maamulka nidaamyada, warbaahinta iyo CDN, macluumaadka kaydka, maamulka iyo amniga, iskuduubka jinsiga, dabeecadda iyo helitaanka maamulka, horumarka iyo shabakada waxyaabaha. Tallaabada xigta waan ka wada hadli doonaa Azure Powershell.
Azure PowerShell waa kullamadii ugu dambeeyey ee la soo dhejiyey ee la siinayo xargaha, taas oo shaqadeeda ay tahay inay sii wado Azure iyagoo isticmaalaya PowerShell. Raajooyinkan waxaa loo isticmaali karaa noocyo kala duwan oo ujeedo ah sida samaynta, tijaabinta, dirista iyo kormeerida maamulada iyo qorsheynta sameynta heerarka Azure. Xaalado gaar ah cmdlets waxaa loo isticmaali karaa in lagu gaaro hawlo isku mid ah sida soo galitaanka Azure sida mashruuca iyo sameynta mashiinnada warshadaha, codsiyada websaydhka, nidaamyada asaasiga ah, iyo wixii la mid ah.
Tan iyo Azure PowerShell waxay isticmaashaa laba qaybood oo kala duwan, waa inaad bilowdid adiga oo furaya Daaqada Awoodda Awoodda kale kadibna ka faa'iideysashada Istaraatiijiga Dib-u-dejinta ee keenaya qaabab gaar ah ee cmdlets AzureRM. Ogsoonow in qalabka la isugeeyey ka hor intaan 2.1.0 aysan soo bandhigin sawir aan fiicneyn oo la mid ah Azure PowerShell. Nidaamka ugu fiican ayaa ah in la xaqiijiyo in aad ka samaysatid Azure PowerShell laga bilaabo .msi ama WebPI nafaqo ahaan iyada oo tirtiraysa foomamka cusub ee la aasaasay.
Sidoo kale, waa inaad ogaataa in AzureRM iyo Azure ay isku xiran yihiin siyaabo dhowr ah oo qaabkan ah oo u baahan in la cusbooneysiiyo isbeddelka labadaba.
Waad sii wanaajin kartaa Azure PowerShell ama WebPI ama bandhigga PowerShell. Soo rog Azure PowerShell oo bilaw nidaamka dejinta. Fursadda aad ka baxsan tahay inaad ku qaadato wax tallaal ah Azure PowerShell 0.9.x soo bandhigay, waxqabadkan ayaa si dabiici ah loogu rakibi doonaa marka la cusbooneysiiyo. Haddii aad dooratid inaad soo bandhigto modules Azure PowerShell oo ka timid PowerShell Gallery, moodaliyeyaasha waxaa si bareer ah u soo daayey qalabeeyaha si loo hubiyo jawi deggan oo ah "Azure PowerShell".
20533: Hirgelinta Qalabka Infrastructure Microsoft Casure
20532 B: Horumarinta Xalalka Microsoft Azure
20487B: Horumarinta Windows Azure iyo Adeegga Webka